Archive du 20170511
Senatera Riana Hivadika amin�ny fanjakana
Mifamahofaho tanteraka ny raharaha Riana Andriamandavy VII, izay voalaza fa enjehin�ny lal�na noho ny fihetsika tsy ara-dal�na nataony dia ny fitarihana andian�olona hikomy sy hitora-bato teny amin�ny Bianco
Fampihavanana Malagasy Tsy ilaina mpanao politika
Mitotongana tanteraka ny fiainam-pirenena. Mihamahantra ny vahoaka Malagasy ary mitombo hatrany ny elanelan�ny manana sy ny sahirana eto Madagasikara.
Paolo Raholinarivo � Andramo samborina ary aho ! �
Naneho ny alahelony mikasika ny fisamborana natao tamin�ny mpanao gazetin�ny radio Jupiter, Fernand Cello, ny mpanolotsain�ny praiminisitra, Paolo Emilio Raholinarivo Solonavalona,
Antoko VAMI Miantso ny miaramila hidina an-dalambe
Feno 45 taona amin�ny alahady ny fahatsiarovana ny tolon�ny 13 mey 1972. Tantara tsy fanadino izany, hoy ny antoko Vahoaka Miray, tamin�ny alalan�ny sekretera jeneraliny, Gaby Vakiniadiana.
Fitsipaham-pitokisana Tsy misy an�izany, hoy i Jean Max Rakotomamonjy
Tsy misy resaka fitsipaham-pitokisana izany ato amin�ny antenimieram-pirenena amin�izao ora sy fotoana iresahantsika izao, hoy ny filohan�ny antenimieram-pirenena Jean Max Rakotomamonjy omaly teny Tsimbazaza raha niresaka tamin�ny mpanao gazety izy.
Manahoana ianao ry Jean a ! Henoko ny teninao omaly ka mba hamaly bontana kely aho anio.
Fisolokiana avo lenta Migadra 5 taona ilay mpiasan�ny DGGFPE
Tsy nandefitra mihitsy ny tale jeneralin�ny DGGFPE na ny � Gestion Financi�re du Personnel de l�Etat �, Ihanta Sahondra eo amin�ny tsy fanarahan-dal�na miseho eo amin�ny rafitra tantanany.
Hafanaina sa hampangatsiahana ?
Tsy mafana akory ny toe-draharaham-pirenena fa hafanaina, hoy ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika iray izay.
Fanovana ny rafi-pampianarana Hihatra manomboka amin�ny 2020
Nihaona mivantana tamin�ireo senatera eto amintsika omaly ny minisitra Paul Rabary manoloana ilay fanovana ny rafi-pampianarana sy ny tetiandrom-pampianarana izay samy hihatra manomboka ny taona 2020 avokoa raha tsy misy ny sampona.
Fampandrosoana ny kaominina Hanome 12 tapitrisa dolara ny Banky Iraisam-pirenena
Nosantarina teny amin�ny Hotely Carlton omaly ny fanombohana ny fanavaozana ny rafitra ara-bola ho an�ny kaominina, eo ambany fiahian�ny minisiteran�ny atitany sy ny fanajariana ny tany, ny minisiteran�ny vola sy ny tetibola,
Asa fampandrosoana Mila mandray anjara feno ny olom-pirenena
Nanamarika ny faha-5 taona nitsanganany teny amin�ny hotely Panorama Andrainarivo ny ONG SAHA (Soa Afafy Hampahomby ny ho Avy) omaly alarobia 10 mey,
Kaomisarian�ny Boriborintany I 700 ireo mpanendaka efa nalefany teny amin�ny fitsarana
Tsy mahagaga raha feno hipoka ny fonjan�Antanimora. Ho an�ny kaomisarian�ny Boriborintany voalohany manokana dia efa tafakatra 700 ireo mpangarom-paosy efa nalefa teny amin�ny fitsarana tato anatin�ny roa taona sy tapany.
Manandriana Anjakan�ny asan-jiolahy tanteraka
Tena mavaivay ny resaka tsy fandriampahalemana isan�andro any amin�ny distrikan�i Manandriana Faritra Amoron�i Mania noho ny fanafihan�ny dahalo mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika, indrindra ao amin�ny kaominina 3 dia i Vohimena,